“Aad ayaan u necbaa Cristiano Ronaldo, wuxuu burburiyay riyadeyda” – Gool FM
(Serie A) 16 Jan 2019. Difaaca kooxda Juventus Giorgio Chiellini ayaa qirtay sida uu u necbaa Cristiano Ronaldo oo haatan ay ka wad tirsan yihiin Bianconeri, kahor inta uusan imaanin Allianz Stadium.
Giorgio Chiellini ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada BBC kaga hadlay arintan wuxuuna yiri:
“Wuxuu goolal naga dhaliyay dhowr jeer, wuxuu burburiyay riyadeyda ahayd ku guuleysiga Champions League kulankii ka dhacay magaalada Cardiff, sidoo kale kulamadii aan ku wada ciyaarnay magaalooyinka Madrid iyo Turin”.
“Waqtigii hore, ku guuleysiga Champions League wuxuu ahaa riyo, balse haatan waa ujeedkeena koowaad, sababtoo ah Cristiano waa ciyaaryahanka adduunka ugu fiican”.
“Waxaan dooneynaa la joogiisa si weyn u dooneynaa inaan qaadno tallaabadii ugu dambeysay aan ugu guuleysan lahayn tartankan”.
“Dabeecada Cristiano Ronaldo waa mid dhab ah, ciyaaryahan ahaan waa mid cajiib ah, lakiin banaanka garoonka, dabeecadiisa, qaabka uu ugu diyaar garoobayo kulamada, sida loo noolaado ciyaaryahan ahaan kubada cagta muddada 24 saacadood gudahood ah… Wuxuu bedelay kooxda”.